Qalab Weyn oo Lagu Xaliyo Dhibaatooyinka Xeerarka Google Analytics | Martech Zone
Axad, Oktoobar 19, 2014 Axad, Oktoobar 19, 2014 Douglas Karr
Oh, kuwa ku garaacaya Google qalabkooda oo dhan! Toddobaadkii la soo dhaafay, macmiil wuxuu lahaa arrimo qaar ka mid ah raadintooda Google Analytics, isagoo isku dayaya inuu kala qaybiyo dadka soo booqda ee ka soo horjeeda kuwa aan ahayn. Udub dhexaadka cilad bixinta waxay ahayd hubinta dhacdooyinka saxda ah iyo xogta loo gudbiyay Google. Waxaan tusay sida aan dhibaatada ugu xallin karo adoo adeegsanaya tabka Shabakada ee Qalabka Kobcinta ee Google Chrome.
Qaar ka mid ah dib u eegista ayaa barta ty su'aal laga weydiinayaa inay taageerto iyo in kale Falanqaynta Universal (waxay sheegaysaa inay qabato). Kumana cusbooneysiinay Universal Analytics (weli) laakiin waxay umuuqataa inay aniga aniga ila shaqeyneyso.
Tags: falanqeeye falanqeeyahagoogle khaladka falanqeeyahagoogle Analytics raadinta koodhkagoogle Analytics guudcilad bixinta Google Analytics